Trump wiilkiisa oo weeraray duqa magaalada London - BBC Somali
Image caption Donald Trump Jr oo ah wiilka madaxweynaha ayaa ah madaxa gudqdiga fulinta hay'adda Trump
Wiil uu dhalay madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa weeraray duqa magaaalada London waxyar uun ka dib markii uu weerar argagixiso ka dhacay caasimadda UK kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan afar ruux.
"Waad ila kaftamaysaa?!" ayuu soo qoray wiilka Trump, arrintaas ayaana isla markiiba dhalisay in lagu eedeeyo in uu si xun u adeegsanayo masiibada dhacday uuna si xun u fasirayo hadalka duqa magaalada.
Ninkii rabay in uu Trump dilo oo maxkamadi xukuntay
"Weerarrada argagixiso waa qayb ka mid ah nolosha magaalo wayn, ayuu yiri duqa magaalada London Sadiq Khan." Ayuu twiterrka sii raaciyay wiilka Trump.
Weeraradaas habeenno badan ayay hurdo la'aan igu rideen ayuu yiri Khan, isaga oo ka fikiraya halista soo wajahaysa magaalooyinka waawayn ee reer galbeedka sida New York iyo London.
Khan oo ah qofkii u horeeyay ee duq magaalo ka noqda magaalada London ayaa horay u weeraray Trump, bishii koobaad ee sanadkanna xayiraadii socdaalka ee uu Trump soo rogay ayuu ku tilmaamay "wax laga xishoodo oo ciqaab ah"
Sanadkii horana Trump ayuu ku eedeeyay "in uu jaahil ka yahay" Islaamka
Britain oo ku gacansayrtay hadal ka soo yeeray Donald Trump
Intii lagu gudo jiray ol'olihii doorashada ee aabihii wuxuu la kulmay dhaleecayn wayn ka dib markii uu qaxootiga Suuriyaanka ah ku tilmaamay in ay la mid yihiin macmacaanka Skittles loo yaqaanno oo qurmay, isaga oo markaas qiil bixin ka dhigaya si aan qof ka mid ah loogu ogolaanin in uu galo gudaha Maraykanka.